Google dia efa namoaka ny kinova Preview an'ny Android 11 ary ireto ny vaovaony | Avy amin'ny Linux
Google dia efa namoaka ny kinova Preview an'ny Android 11 ary ireto ny vaovaony
Google nanolotra amin'ny talata ny voalohany Android 11 Developer Preview kinova, ny fanavaozana lehibe manaraka ny rafitry ny findainao. Na dia tsy nampidirin'i Google pikantsary maro aza ny lahatsorany hanohanana ny fanambarana ireo fanovana vaovao, ny orinasa dia nanao fampanantenana lehibe, toy ny fiasa manokana sy ny interface vaovao fandefasan-kafatra, fomba fiasa vaovao mifandraika amin'ny 5G na fizakantena, ary koa fanatsarana hafa toy ny firaketana ny efijery teratany, sns.
Ity dia topy mason'ny Android 11 ho an'ny mpamorona izay tonga aloha kely noho ny mahazatra ary efa azo alaina amin'ny fitaovana Pixel 2, 3, 3a ary 4, ary koa ny sary mahazatra an'ny rafitra. Ny anarana Android 11 dia valin'ny nomenclature vaovao izay natsangana taorian'ny fanombohana ny kinova taloha an'ny rafi-piasan'ny finday.
Ireo no sasany amin'ireo fiasa vaovao sy fanavaozana izay nosoratan'i Google tao amin'ny bilaogin'izy ireo:
Tsara kokoa Safidy fahazoan-dàlana "tokana" ho an'ny rindranasa: Ity dia iray amin'ireo fiasa nasongadin'i Google tamin'ny fanambaràn'ny Developer Android 11 Preview satria hanome "alalana tokana" ho an'ireo rindranasa te hiditra amin'ny angon-drakitra misy azy ireo, fitaovana mikrô sy fakan-tsary. Fanampiny tsotra io, nefa mahatonga ny Android ho azo antoka kokoa.
Android Q dia hatao hoe Android 10 ary Google nanambara fa mandao ny anarana coden
Ny API "Bubble", ity dia mpizara vaovao ho an'ny rindranasan-kafatra fandefasan-kafatra izay mamela ny resadresaka maro ho mora idirana na aiza na aiza, mampihena azy ireo ho faribolana mitsingevana kely indrindra manoloana ny fifandraisana. Ankoatry ny fampiharana fandefasan-kafatra Google, ny fampiharana hafa toa ny WhatsApp, Facebook Messenger na Signal dia mety mifanaraka.
Zava-baovao iray hafa miavaka amin'ity topi-maso mialoha ny Android 11 ity ny Google dia nanova ny tontonana fampandrenesana amin'ny Android indray Ary amin'ity taona ity dia nilaza i Google fa ny tontonana dia hampiditra "fizarana natokana ho an'ny resaka aloky ny fampandrenesana."
Google dia nanolotra faritra "resadresaka" vaovao ao amin'ny faritra fampandrenesana izay mizara hafatra vaovao amin'ny faritra misy azy alohan'ny mailaka rehetra, ny safidin'ny Instagram ary ny fanavaozana ny app. Ny tanjona dia ny hahatonga ireo faritra fifandraisana amin'ny findainao ho mora azo kokoa ary hamela ireo mpampiasa "mahita eo noho eo ny resaka ataonao amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny olona ao amin'ny rindranasa tiany indrindra."
Fandraisana an-tsary: Ity fiasa ity dia ahafahanao manoratra ny efijery ary na dia efa nanana kinova aza i Google amin'ny beta an'ny Android 10 izay tsy nahatratra ny kinova farany.
Pejy "Fifanarahana fampiharana": Google dia nanamora ny fiainana ny mpamorona rindrambaiko amin'ny Android 11 satria namorona pejy "App Compatibility" i Google miaraka amina fampiasa switch ho an'ny fampiharana tsirairay.
Ny hevitra dia ny tokony hamaritana SDK vaovao kendrena ary avereno ny fangatahanao hizaha toetra azy, sokafy fotsiny ny pejy mifanentana ny fampiharana, atombohy ny fanovana ny bokotra ary zahao izay tsy mandeha?. Google dia nilaza ihany koa fa nanandrana "mampihena ny fiovan'ny fitondran-tena mety hisy fiatraikany amin'ny fampiharana" izy ary nanao fanovana fanekena raha azo atao.
Fanandramana 5G tsara kokoa: Google dia mamela ny mpampiasa bebe kokoa eran'izao tontolo izao hanana traikefa 5G tsara kokoa. Ao amin'ny Android 11, ny orinasa dia nanavao sy nanavao ny fifandraisana API hahafahanao manararaotra ny hafainganam-pandehan'ny 5G. Ity API ity dia mamela ny mpamorona hanamarina raha tsy misy fetrany ny fifandraisana ary raha izany dia manomeza vahaolana avo lenta na kalitao afaka mampiasa angona bebe kokoa.
Mitohy ny fanavaozana ny Android amin'ny Android 11: amin'ny Android 10, ny «Tetikasa mainline», namindra singa singa maro amin'ny APK azo havaozina amina endrika rakitra matanjaka sy matanjaka kokoa antsoina hoe "APEX".
APEX dia endrika fisie manokana natao ho azo idirana taloha kokoa amin'ny fizotran'ny boot ary manana alalana bebe kokoa noho ny APK, ka mahatonga azy io ho mendrika hampiantranoana sy hanavaozana ireo singa ao amin'ny rafitra ambany.
Farany dia nanambara fanitsiana kely maro hafa izy ireo, toy ny fanovana mandeha ho azy amin'ny maody maizimaizina sy ny fahaizana manindry fampiharana eo an-tampon'ny takelaka hetsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » About us » Google dia efa namoaka ny kinova Preview an'ny Android 11 ary ireto ny vaovaony
Bedrock Linux: Linux iray metadistribution mahafinaritra tsy mahazatra
MX Linux: Vaovao farany ho an'ny volana Febroary 2020